အီမို အခြားemoနှင့် punk တီးဝိုင်းများသည် နောက်လိုက်များဖြစ်လာခဲ့ပြီး emo ဟူသော ဝေါဟာရသည် မသဲမကွဲဖြစ်လာခဲ့သည်။ နယ်နမိတ်သတ်မှတ်ထားသည်မှာ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်လွန်းသည်။ Diary ပြီးနောက် Sunny Day Real Estate ပြိုကွဲခဲ့သည်။ အခြားအဖွဲ့ဝင်များသည် Foo Fighter ကဲ့သို့ Project ထဲများသို့ အလုပ်လုပ်နေစဉ် တစ်ယောက်တည်း အသက်ဝမ်းကျောင်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူတို့သည် album သုံးခုကျော်ဖြန့်ချီခဲ့သည်။ Emo ကို ၁၉၉၀တွင် တီထွင်ဆန်းသစ်ခဲ့သော်လည်း Policy of3နှင့် Hoover တို့သည် post-hardcore ဆက်လက်ကျန်ရှိခဲ့သည်။
ဘီ-၂၉ ဗုံးကြဲလေယာဉ် An example ofalater variant of the B-29, the B-50 Superfortress (which was powered by four Pratt & Whitney R-4360-35 Wasp Major engines), acted as the mothership for experimental parasite fighter aircraft, such as the McDonnell XF-85 Goblin and Republic F-84 Thunderjets as in flight lock on and offs. It was also used to develop the Airborne Early Warning program; it was the ancestor of various modern radar picket aircraft. A B-29 with the original Wright Duplex Cyclone powerplants was used to air-launch the famous Bell X-1 supersonic research rocket aircraft.